musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Guestpost » Chii chaunoda kuziva nezve kutamira kuDubai
Kushandura nzvimbo yako yekugara inogara yakaoma uye inopedza nguva, kunyanya kana zvasvika pakutamira kune imwe nyika. United Arab Emirates inyika yakasimukira mune zveupfumi uye tekinoroji. Yakavhurika kune vagariwo zvavo uye mabhizinesi, asi hazvisi zvese zviri nyore pano. Kwakabva - https://emirates.estate - ichakuudza nezve chaiyo yekutamira kuUAE.
Tsika maficha eEmirates
Mamiriro epamusoro epasi rose, hupfumi hwakasimba uye mamiriro ebhizinesi akasununguka haapokane chokwadi chekuti UAE inyika yechiMuslim ine tsika dzayo.
Mitemo muEmirates yakasimba kumunhu wese: vagari vemo nevekunze. Pasinei nechokwadi chokuti maererano nevashanyi, zvinoshandura maziso kune zvinhu zvakawanda. Hazvirevi kuti kutyora kwakasimba kucharamba kusina kurangwa. Huwandu hweDubai hwakavimbika kune vashanyi uye mukutsinhana neizvi zvinotarisira kuremekedzwa kwehunhu hwenzvimbo.
Ndezvipi zvinotarisirwa zvakamirira vatorwa
Vazhinji vatorwa vakatamira kuUAE nekuda kwekugara zvachose mazita akati wandei ezvikonzero. Tinokurudzira kuti tizive zviri nani.
Hupfumi hwakagadzikana uye nzvimbo yakanaka yemari. Chinhu chekugara zvakanaka kwemari chinokwezva chikamu chikuru chevanhu vanotama. Nhamba yepamusoro yemuhoro, pasina mutero wemari, pamwe nemari yakagadzikana, inoumba mamiriro ezvinhu aunoda kuedza;
Kubhadhara mari mune real estate. Iyo real estate sector muDubai yakagadziridzwa zvakanyanya. Izvi zvinoratidzwa nekudiwa kukuru, basa rekudyara uye kuwedzera kwakasimba kwemitengo. Nekuda kweizvozvo, vatengi vezvivakwa zvemuno vanogamuchira kwete chete yakanaka nzvimbo yekugara, asiwo yakakosha asset;
Mihoro yakawanda. Nyanzvi dzakakodzera muDubai, sedzimwe nzvimbo, dzinokosheswa, saka makambani emuno akagadzirira kubhadhara zvakanaka;
Migration. Pane zvakawanda zvingasarudzwa izvo mutorwa anogona kuva mugari weEmirates: kuroorana, kudzidza munyika, basa, mupiro wakakosha mukusimudzira nyika uye kudyara mune real estate;
Kuchengetedzwa kwepamusoro. Iyo Emirates inotora iyo 3rd nzvimbo maererano nekuchengeteka, nepo Dubai iri panzvimbo yechisere yemaguta akachengeteka pasi rose.
Ndiani achabvumirwa kufamba
Ichatenderwa kune chero munhu akapfuma mune zvemari, pasina rekodhi yemhosva uye nhoroondo yakanaka yechikwereti.
Ndeipi mwero wekugara muDubai
Dubai ndiro guta rinotungamira pasi rose maererano nemuhoro, pamwe neakapfuma kwazvo eEmirates. Mutengo wezvivakwa muDubai unotanga kubva USD 3,000 kusvika USD 8,100.
Kutenga real estate muUAEIwe unofarira chivakwa chiri kutengeswa muUAE? Tsvaga imba yekurota kubva kumazana esarudzo paEmirates.Estate webhusaiti. Pano iwe unowana chete zvakanakisa zvikumbiro kubva kune vakavimbiswa varidzi uye vakakura vagadziri veUAE. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kufamba uye kutenga zvivakwa muDubai, ndapota taura nemaneja wekambani.